Sirni awwaala goota Oromoo Koloneel Aliyyii Cirrii magaalaa Bodireetti Oromia Shall be Free |
bilisummaa November 16, 2017	Comments Off on Sirni awwaala goota Oromoo Koloneel Aliyyii Cirrii magaalaa Bodireetti
Qeerransa baddaa baalee
Goota lapheen sibiilaa
Alagaan si’i ilaalee
Gaaddidduu kee argee jiila!
‘Dhoombiriin’ diina dhooftee
Galchite boolla sirrii
Duuti hin ooltuuf duute kaa
#Aliyyii korma #Cirrii!
Waan barri hin dabarsine
Seenaa deesse aayyoon kee
Foon keetu du’e malee
Yoomuu hin du’u kaayyoon kee!
(Walaloon kan Leta Qenanii Agati )
Sirni awwaala goota Oromoo Koloneel Aliyyii Cirrii magaalaa Bodireetti guyyaa har’aa bakka angawootni mootummaa fi Ummanni hedduun argamanitti Kabaja ol’aanaadhaan geggeeffamee jira.
Previous Ahmadiin Jabal Falmataa Haqaa Mirga Dhala Namaati!
Next Damee hortee oromo Ilmman Oromo lammii (2)